HotSpot – Xiaomi Guide
MIUI Zawgyi Font ( Font Replace Method: Global/China )
သည်နည်းလေးကတော့ MIUI မှာ လွန်လေပြီးသောအချိန်ကတည်းက Xiaomi Theme Store ထဲမှာ Myanmar Zawgyi font တွေ မရှိသေးချိန်မှာကတည်းက Xiaomi ဖုန်းတွေမှာ Zawgyi Font ကို ထည့်ခဲ့တဲ့နည်းလေးပါ။ သိသူတွေလဲ များပါတယ်။ Xiaomi users အသစ်တွေလဲ များလာတော့ အခုအချိန်မှာ myanmar font က ပြောင်းသွားပြန်ပြီ။ Themes က ပြောင်းသွားပြန်ပြီ။ ဘာဖြစ်လို့ သည်လိုတွေဖြစ်နေတာလဲ.. စတာလေးတွေကို နားလည်အောင်ရယ်.. မိမိဆီမှာ သုံးချင်တဲ့ Font ttf…
Good Method for Myanmar Zawgyi Font – MIUI 9.5+
MIUI 9.5 မှာ Xiaomi အနေနဲ့ Theme Policy တွေကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ အဲသည်အခါမှာ အများသိတဲ့အတိုင်း မိမိတို့ဆီမှာ ရှိနေတဲ့ Themes, Fonts mtz file တွေကို အရင်လို Import လုပ်.. Apply လုပ်သုံးဆိုတာမျိုးမရတော့ပါဘူး။ Themes အနေနဲ့က Theme Store ထဲမှာရှိတဲ့ Free Themes တွေကို ရှာဒေါင်းသုံးလို့ အဆင်ပြေပေမယ့် Myanmar font အတွက် ထည့်ဖို့အဆင်မပြေဖြစ်ပါတယ်။ Theme Store ထဲမှာ Myanmar fonts တွေကိုပါ ဖြုတ်ချထားတော့ Mi Acc…
ARB & MIUI : PART – II
အခုလောလောဆယ် သည်စာကိုရေးနေချိန်ထိ ( ၁၄-၁၂-၂၀၁၈ ) Xiaomi မှာ ARB ပါနေတဲ့ ဖုန်း Model တွေကို လေ့လာမိတာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ သည်နေရာမှာ anti :4လို့ဖြစ်တဲ့ဟာက ARB Protection ပါနေပြီ။ Downgrade ဆင်းမရဘူးလို့ သတ်မှတ်ထားချက်အရတွေ့ရှိမိတာကို ပြထားတာပါ။ အောက်ပိုင်းမှာ fastboot rom တွေနဲ့ anti ပတ်သက်မှုလေးတွေကို လေ့လာကြည့်ရင် anti value တွေရဲ့သဘာဝကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Mi 6x ( Wayne ) Redmi…
ARB & MIUI : PART – I
What is ARB??? ဆိုတာကနေပဲ စကြရအောင်ပေါ့ခင်ဗျာ။ ARB ဆိုတာ ( Anti Rollback ) ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ အတိုကောက်ပါပဲ။ Rollback ဆိုတဲ့ ယေဘုယျအဓိပ္ပာယ်ကတော့ အခုအခြေအနေမရောက်ခင် အရင်ရှိနေတဲ့ အခြေအနေကိုပြန်သွားတယ်၊ အခုအဆင့်ကိုမလုပ်ခင် အရင်အဆင့်ကို ပြန်ထားတယ် စသည်သဘောမျိုးမှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Anti ဆိုတာရှေ့ကထည့်လိုက်တော့ ဆန့်ကျင်ဖက်သဘောမျိုး ဖြစ်သွားတာပေါ့။ မူလ အခြေအနေကို ပြန်သွားလို့ မရတော့ဘူးပေါ့။ အဲဒါကို ဖုန်းတွေရဲ့ firmware မှာသုံးနှုန်းတော့ အခုတင်ထားတဲ့ firmware version ကနေ အရင်တင်ခဲ့တဲ့၊ အရင်ရှိနေခဲ့တဲ့ firmware…
MIUI 10 လဲ တော်တော်များများရပြီးဖြစ်နေပြီဆိုတော့ စပြိးတွေ့လာရမယ့် ကြော်ငြာတွေ ပေါ်ပေါ်လာလို့ ဘယ်လိုပိတ်ထားရမလဲဆိုတာလေးပါ။ ဒါတွေက Virus လိုလဲမဟုတ်ပါဘူး။ MIUI Rom နဲ့အတူတူပါလာတဲ့ Mi Music, Mi Security, Cleaner, Mi Browser, Mi File Explorer, Downloader ( ဖုန်းဝယ်လို့ စက်ဖွင့်တာနဲ့ တစ်ပါတည်း ပါလာတဲ့ system app တွေပေါ့။ အချို့တရုတ်လိုဟာတွေ မကြိုက်ဘူး ဖျက်လို့ရလားဆိုတာတွေက Uninstall နှိပ်လို့ရတာဆို ဖျက်သာပစ်ပါ။ ရပါတယ်။…
Delete Other Files from storage in Miui
Storage ထဲမှာ Other Files ဆိုပြီး ပြနေတာက ဘာတွေလဲ။ ဘယ်နေရာကဟာတွေ၊ ဘယ် files တွေကို ပြတာလဲ။ ဘာတွေကိုဖျက်လို့ရလဲ။ ဘယ်လိုရှာဖျက်ယူရမလဲ။ apk တွေ Install လုပ်ရင် file တွေ ဘယ်ပုံစံဝင်သွားမလဲ။ ဘယ်လိုတွေ အလုပ်လုပ်မလဲ.. စတာလေးတွေကို ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ ဖျက်တယ်ဆိုတာ လွယ်ပါတယ်။ သူတို့အလုပ်လုပ်တဲ့သဘာဝလေးတွေ သိနေရင် ဖျက်တာတင်မက ကိုယ်လိုချင်သလို ဖြစ်မလာတာ ဘယ်လိုကြောင့်တွေကိုး ဆိုတာမျိုး idea ရလာမှာပါ။ ဥပမာ ကိုယ်သုံးတဲ့ app တစ်ခုထဲက…
Posts tagged as “HotSpot”
Fixing Tethering Issues
Published December 6, 2018 by Thet Zaw Ko
ကိုယ့်ဖုန်းမှာ WiFi Hotspot ဖွင့်တယ်။ ရတယ်။ အခြားဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာကနေ WiFi ကိုချိတ်တယ်။ ရတယ်။ အင်တာနက်တော့မထွက်ဘူး။ Mobile Data pack တွေလဲ အစုံရှိတယ်.. စသည်ဖြင့် ဖြစ်တတ်တာလေးမျိုးတွေအတွက် Fix ပေးဖို့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုပါ။ ဒါမျိုးတွေကို Tethering လို့ခေါ်တာပေါ့။ ကိုယ့် Mobile Data ကို HotSpot ပြန်လွှင့်ပေးပြီးသုံးတာ WiFi Tethering…. ကွန်ပျူတာမှာ USB Cable နဲ့ချိတ်ပြီး အင်တာနက်သုံးတာ USB Tethering… Bluetooth မှတစ်ဆင့်ပြန်လွှင့်ပေး…
Boot Loader Unlock (2)
Mi Flash Tool (6)
General Tips (47)